လက်ထပ်ဝတ်စုံကြောင့် ရေနစ်သေမလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သတို့သမီး – Aung Par Say
လက်ထပ်ဝတ်စုံကြောင့် ရေနစ်သေမလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သတို့သမီး
November 19, 2019 Aung Zaw Linn
သတို့သမီးလက်ထပ်ဝတ်စုံဟာ လေးလံလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင်အလာရ ၀တ်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့ ဒီဝတ်စုံကို သတို့သမီး တိုင်း ချစ်ခင်ကြသလို၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် ဂုဏ်အယူရဆုံး ၀တ်စုံတွေထဲမှာ လက်ထပ်ဝတ်စုံက နံပတ် 1 နေရာက ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။
လက်ထပ်ဝတ်စုံတစ်ခုရဲ့ ပျမ်းမျှအလေးချိန်ဟာ5ကီလိုဂရမ် (11) ပေါင် အလေးချိန်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဝတ်စုံနဲ့အတူ ရေထဲကို ခုန်ချအောင်ပွဲခံမယ်ဆိုရင်တော့ သတို့သမီးဝတ်စုံရဲ့ အလေးချိန်ဟာ5ဆလောက်အထိ လေးလံသွားပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့4ဆလောက်သာ လေးလံတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒါက အလေးချိန်ပြောင်းလဲမှုသာ ရှိသေး တာပါ။
ရေရဲ့စွဲအား၊ မြှုပ်အား၊ ဖိအား၊ လက်ထပ်ဝတ်စုံရဲ့ ပြောင်းလဲအလေးချိန်တွေဟာ လက်ထပ်ဝတ်စုံနဲ့ သတို့သမီးတစ်ယောက် အတွက် သေရွာကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပို့ပေးနိုင်တဲ့ မရဏ၀တ်စုံဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အခုလည်း သတို့သမီးအသစ်သစ်တစ်ယောက်ဟာ မင်္ဂလာအောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်နဲ့ ရေထဲကို ခုန်ချအောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။
42 စက္ကန့်သာ ကြာမြင့်တဲ့ ဒီဗွီဒီယိုဖိုင်မှာ ပထမဆုံးတော့ အပျော်ဆိုပြီးခုန်ချခဲ့တာပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ အခြေအနေ ကို ရိပ်စားမိပုံရပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကယ်ပါယူပါလို့ အကူအညီတောင်းခဲ့ရပါတယ်။ သတို့သမီးဟာ အပေါ်ကို လန်တက် လာတဲ့ လက်ထပ်ဝတ်စုံနဲ့ ခေါင်းကို ပြန်အုပ်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြည်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
ရပ်ကြည့်နေ သူ နှစ်ယောက်သုံးယောက်လည်း ရေထဲကို ခုန်ဆင်းပြီး အကူအညီပေးခဲ့လို့သာ သက်သာရာရခဲ့ခြင်းပါ။ နီးစပ်ရာကိုလည်း သတိပေးလိုက်ပါဦး။ သတို့သမီးဝတ်စုံနဲ့ ရေထဲကို မခုန်ချဖို့၊ ရေထဲကို ခုန်ချအောင်ပွဲခံချင်ရင်လည်း သတို့သမီးဝတ်စုံချွတ်ပြီးမှ ခုန်ချဖို့ပေါ့။ အဲ တစ်ခြား ပေ့ါပေါ့ပါးပါး အ၀တ်အစားမျိုးတော့ ၀တ်ထားနိုင်ပါတယ်။
သေဆုံးပြီး ရက်အနည်းငယ်မှာပင် ဓာတ်ပုံနောက်ကွယ်မှာ ပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့တဲ့အဖွား
facebook , viber, messger သုံးရင်း ထောင်နန်းမစံချင်ရင် ဒါလေး ဖတ်ထားပါဗျာ
Aung Zaw Linn
Freelancer Copy & Paste Writer
အိမ်ရှင်တွေစားတာကို ထိုင်ကြည့်နေရရှာတဲ့ သနားစရာ အိမ်ဖော်မလေး
November 20, 2019 Aung Zaw Linn
နေမကောင်းတဲ့ ဇနီးသည်ကို ကောက်ညှင်းကျည်တောင့် ရောင်းကျွေးရင်း ဘဝကို ရုန်းကန်နေရတဲ့ မျက်မမြင်အဖိုး
November 26, 2019 Aung Zaw Linn
ရင်သားကြီးကြောင်းကြွားပြီး သေးတဲ့သူတွေကို လူရာမဝင်ဘူးလို့ပြောလို့ ဝိုင်းဆဲခံရတဲ့မိန်းကလေး
တစ်သက်မှာ တစ်ခါဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှသည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အံတော် December 6, 2019
“မြင့်မြတ်မြှောက်ပေးတာကြောင့် မကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုတောင် လုပ်လိုက်ရတဲ့ ယုန်လေး” December 6, 2019
မိုးအောင်ရင်ကို သူ့မိသားစုက ကြိုးကိုင်နေတယ် လို့ ပြောလာတဲ့ ချစ်သူဟောင်းဖြစ်သူ ခင်မြတ်နိုး December 6, 2019
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ နှစ်ကျော်က သွေးလှူပေးဖူးတဲ့ မိန်းကလေးက အခု ကိုယ့်ဇနီး ဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ရတဲ့အခါ December 6, 2019
အောင်သူ training ဆင်းနေလို့ လိုက်စောင့်ပေးနေတဲ့ သားသားနဲ့ မေမေပိုးအိအိခန့် December 6, 2019
မြန်မာပြည်ရဲ့အအောင်အမြင်ဆုံး အနုပညာရှင် ၃ဦး December 6, 2019
အဖိုးတန်သစ်ပင်ကျောက်ရုပ်ကြွင်းကြီးကို တရုတ်ကုမ္ပဏီလက်ထဲ မရောက်အောင်တားဆီးပေးကြပါ December 6, 2019
November 2019 (858)
Army News (1)
Cele News (559)
Daily News (290)
International News (174)
Aung Par Say News provides you with the latest breaking news, top stories and videos straight from the entertainment industry.
Aung Par Say provides you with the latest breaking news, top stories and videos straight from the entertainment industry.
Army News Cele News Daily News Health International News Knowledge Sports News Strang Uncategorized
Copyright © 2019 Aung Par Say